Huawei wuxuu ku soo bandhigi doonaa taleefankiisa isku laaban MWC 2019 | Androidsis
Huawei wuxuu na soo xigtay dhacdo 24-kii Febraayo ka dhacday MWC
MWC 2019 ee Barcelona wuxuu bilaabay inuu qaabeeyo. Noocyo dhowr ah ayaa horeyba u xaqiijiyay joogitaankooda dhacdada taleefanka ee caanka ah, sida LG, taasi waxay balanqaadeysaa inay naga tagi doonto warar xiiso leh, ama Sony, Taasi waxay la imaan doontaa iyada oo la cusbooneysiiyay dhamaadka-dhamaadka telefoonada kale. Huawei sidoo kale waxay joogi doontaa munaasabada ka dhaceysa Barcelona. Nooca Shiinaha ayaa mar hore ku dhawaaqay soo bandhigidiisii ​​ugu horreysay.
Maaddaama sumcadda Shiinaha ay hadda soo daabacday boodhadh ku dhawaaqaya joogitaankeeda MWC 2019. Sidaa darteed Huawei wuxuu joogi doonaa munaasabadda waxaana durba jira warar ku saabsan waxa shirkaddu soo bandhigi karto. Dad badan ayaa soo jeedinaya inay noqon laheyd taleefanka casriga ee isku laaban la soo bandhigi doono.
Bilood ka hor Waxaa la sheegay in Huawei ay ku soo bandhigi karto taleefankeeda casriga ah MWC 2019. Laakiin si tartiib tartiib ah waxay umuuqataa in la xaqiijiyay. Hadda sumadda Shiinaha ayaa noogu yeereysa dhacdo Febraayo 24. Waa maalin ka hor bilowga rasmiga ah, laakiin in noocyo badan ay ka faa'iideystaan ​​inay soo bandhigaan wararkooda.
Martiqaadka nooca Shiinaha ay soo direen, oo aad arki karto bilowga, waxaan arki karnaa qalab sida muuqata isku laaban. Marka lagu daro lahaanshaha, taas oo noqon karta shaashadda labada dhinac. Xagasha furitaanka sidoo kale waa wax aan macquul aheyn inay ka ahaato taleefan caadi ah. Sidaa darteed, waa wax lala yaabo in uu noqdo taleefankaaga isku laaban.
Soo bandhigidani waxay imaan doontaa maalmo ka dib marka loo eego taleefoonka casriga ah ee Samsung, kaasoo dhici doona 20-ka Febraayo. Sidaa darteed, Joogitaanka Samsung ee MWC 2019 waxay umuuqataa mid aan su'aal ka taagnayn. Maxaa ka tagaya caannimada noocyada Huawei sida moodooyinka ay wataan. Ma ogin haddii ay jiri doonaan telefoonno kale marka laga reebo midkan dhiniciisa ah.
Si kastaba ha ahaatee, 24-ka Febraayo saacaddu markay tahay 14:00 duhurnimo waxaa ballan la leh shirkadda Huawei. Nooca Shiinaha ayaa soo bandhigi doona taleefankiisa casriga ah, kaas oo noqon kara taleefankiisa isku laaban. Waxaan si taxaddar leh u dhegeysan doonnaa macluumaadka cusub ee ka imanaya qalabkan iyo soo bandhigidda sumadda. Maxaad u malaynaysaa inay soo bandhigayaan?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Huawei wuxuu na soo xigtay dhacdo 24-kii Febraayo ka dhacday MWC
Ku xoq sawirada Nexus 5 ee loo waxyooday Parallax 3D Wallpaper